China isibambo ezimazombezombe isibalo edonsa kabili eceleni kombhede iKhabhinethi izinkuni okuqinile ohlangothini iKhabhinethi # 0121 Yamazonhome
Isibambo esigaxiwe esinemidwebo ephindwe kabili yombhede wombhede wekhabhinethi ohlangothini oluqinile lwekhabethe # 0121
Inombolo imodeli: Amac-0121
Usayizi: 450mm * 400 * 470mm
Ikhabethe lekhabethe le-TV eliyizinkulungwane eziyikhulu
Kukhethwa i-oki elimhlophe elingeniswe lisuka eNyakatho Melika. Ifenisha eyenziwe ngayo ayimelani nomthelela, ukungqubuzana, ukubola, kulula ukomisa, ukukhubazeka okuncane, kulula ukwakhiwa, futhi kulula ukunamathela. Izinga lokuncipha lincane kakhulu, ukuze lisetshenziswe esimweni sezulu esishintshayo ngaphandle kokuqhekeka nezinye izinkinga. Kuyinto enhle yefenisha.
Umklamo oyindilinga oyindilinga
Amakhona ekhabethe ayindilinga futhi abushelelezi, futhi anakekela ukuphepha kwakho nomndeni wakho kokucashile. Uwoyela wemifino wemifino wemvelo uhlikihlwa ngesandla futhi usetshenzisiwe, onempilo futhi onobungane nemvelo, ngaphandle kwephunga elehlukile. Umbala uyaguquguquka futhi ukhuluphele, unokuthinta okuntekenteke, futhi awuthinti ubuhle bezinhlamvu zemvelo zokhuni. Kuyaziwa ngokuthi "inhlanganisela yegolide" yefenisha yokhuni oluqinile.
Itafula eliseceleni kombhede eliseceleni kombhede elinesibambo esinezimpondo
Idizayini ihlukaniswe ngamadilowa amabili futhi akukho gumbi lokugcina impahla. Kufanele abangane abangathanda ukufaka izinto kwikhabethe ukuze kugcinwe ukubukeka kwetheyinti kuhlanzekile. Dala indawo yokugcina eyimfihlo efanele wena. Uma kuqhathaniswa nesibambo esidaluliwe, isibambo esine-grooved singavimbela ngempumelelo ukunwaya nokudonsa kalula. Akugcini nje ngokuqinisekisa ukubukeka okulula futhi okuyimfashini, kepha futhi akusongeli ukuphepha kwakho.
I-Dovetail Tenon Fusion Solid Wood Slide
Inqubo yokudonsa ekhabetheni kanye ne-tenon kuhlanganiswe nensimbi yesitimela esiqinile, inqubo yendabuko yaseLuban, uma isetshenziswa isikhathi eside, iyaqina futhi ibushelelezi. Thuthukisa isakhiwo sekhabethe elixhumene ngqo, ukuze idilowa likwazi ukuthwala umthwalo onamandla futhi kungabi bungozi bokuqhekeka. Itafula eliseceleni kombhede licwebezelwe kahle nxazonke, ngaphandle kwama-barbs, futhi linokuthungwa okubushelelezi nokubushelelezi. Awudingi ukukhathazeka ngokunwaya lapho ufaka izingubo zakho.
Imilenze eminyene eqinile yokhuni olulodwa izinzile ngokwengeziwe
Imilenze eqinile yokhuni oluqinile, ukwakheka okumile mpo, ukwakheka okuthwala umthwalo wesayensi nokuxhumeka okuzinzile nedeskithophu, i-18cm ngaphezu komhlaba kugcinwa indawo ehlanzekile. Okuthambile okuzwakala ngaphansi komlenze akushibilikisi futhi kuyamelana nokugqoka, futhi idizayini eyenziwe njengomuntu ayikwazi nje ukuvikela phansi ekuklwebhekeni, kepha nasekulahlekelweni ukungqubuzana kwemilenze yokhuni. Idizayini yomlenze owodwa eyenziwe ngokhuni yenza ukuthwala umthwalo kuzinze kakhudlwana.
Langaphambilini I-China Factory 8M 10M Enemibala Ngokwezifiso Yenza I-Air Trick Pool Float Inflatable Yoga Mat 0395
Olandelayo: Ikhabethe eliseceleni kwekamelo lokulala ebusuku elincane elilula elilodwa # 0122
Simple single ekhabetheni lokulala nightstand ohlangothini ca ...
Khanyisa okunethezeka zemabula lokudlela combina elula ...
I-Solid Wood Sisal Cat Scratch Board 0237
High-Ibanga Inja Kennel Solid Izinkuni Uzimele Pet Umbhede ...